SP-G38 120ml ejiri mee iko Ultrasonic Okpukpo Diffuser, China SP-G38 120ml Ejiri mee Glass Ultrasonic Okpukpo Diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-G38 120ml Ejiri mee Ultrasonic Aroma Diffuser
Packaging Details: 12 Ibe / katoonu
120ml ejiri mee Glass Ultrasonic Okpukpo Diffuser
1.7 Uhie ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe: Mkpa mmanụ dị mkpa na-atụgharị uche n'echiche nwa gị na ọkụ ọkụ 7 na-agbanwe agbanwe, nke ọ bụla nwere ike idozi n'etiti ọnọdụ Bright na Dim, enwere ike idozi agba. Nnukwu ọkụ maka ụmụaka na-atụ ụjọ nke ọchịchịrị mgbe ha na-ehi ụra. 7 agba nke ìhè (White, pink, oroma, edo edo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, odo odo) nwere ike gbanwee n'etiti usoro ọgbụgba nwayọ na otu agba agba edozi.
2.Diffuser / Humidifier / Night Light: Naanị dobe mmanụ kachasị amasị gị ma nwee obi ụtọ na-esi ísì ụtọ mgbe ị na-edozi ikuku. Ọzọkwa ọ nwere ike dị ka a humidifier na-enweghị mmanụ ịgbakwunye ọzọ mmiri mmiri. Ihunanya 7 agba Ikanam ọkụ ebua gị eyen pụrụ ichetụ n'echiche. Agba 7 na-agbagharị n'onwe ya ma ọ bụ dozie otu agba.
3.HIGH Ogo ihe: Elu mere nke pụrụ iche na pụrụ iche glass.When ọ na-abịa anyị adịchaghị mkpa mmanụ diffusers, anyị na-eme a n'ókè nke na-eji ihe ọ bụla ma otu àjà ihe ọ ultraụ -ụ-elu ọkwa, mma, na eco-enyi na enyi ihe, nakwa dị ka dị ka usoro nhazi nke ọgbara ọhụrụ na njikwa njikwa njikwa siri ike.
4.Portable: Diffusers maka mkpa mmanụ na-etu ọnụ obere na enwekwa size. Na-enweghị ebe dị ukwuu, ọ na-adị mfe ịnọdụ ala na tebụl dị ka ụlọ ọrụ mgbe ị na-ehi ụra / na-arụ ọrụ / ịgụ /. Obere imewe na-eme ka a na mini humidifier nwere ike mfe juru n'ọnụ na akpa gị na-amalite aromatic njem.
5.EGO BU EGO: Mgbapụta mmanụ na-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe mmiri gwụrụ. Ihe mgbasa a na-esi ísì ụtọ agaghị egbochi ọmụmụ ihe gị, ọrụ ma ọ bụ ụra gị. Adabara Home, Yoga, ime, Office, wdg zuru okè onyinye echiche maka ezinụlọ na ndị enyi hụrụ aromatherapy ma ọ bụ nwere ike irite uru site na ọgwụgwọ Aromatherapy.
mmepụta DC12V, 1A
ihe onwunwe GLASS + ABS + PP
ngụ oge 4H / 8H / ON
Olu oyuyo 15-30ml / h
Oge Ikpeazụ 4-8hours
Nhazi Φ9.4 * 21.2cm
unit ibu 700g
Ogo igbe agba 14.6 * 14.6 * 27.2cm
ngwugwu 12 iberibe / katoonu
Oke kaadionye 44x44.5x55.7cm
SP-G02 100ml ihe na-ewu ewu seramiiki na-ewu ewu
SP-L28 300ml seramiiki igwe okwu APP na-achịkwa ihe na-esi ísì ụtọ ultrasonic
SP-G14M 100ml multifunctional elekere ultrasonic esi ísì diffuser
SOICARE 4.3L Njikwa Ime Oku Agbara Mpempe Mmanụ Ultrasonic ikuku Humidifier